पारसले थाले राजनीतिक भेटवार्ता, समात्लान् बाबुको लाइन ? - Everest Dainik - News from Nepal
पारसले थाले राजनीतिक भेटवार्ता, समात्लान् बाबुको लाइन ?
काठमाडौं, भदौ १५ । लामो समय राजनीतिबाट टाढा रहेका पूर्वयुवराज पारस शाहले राजनीतिक भेटवार्ता थालेका छन् । बिहीबार उनले राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीका दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेतासँग साढे चार घन्टा गोप्य छलफल गरेका छन् ।
तीनवटै पार्टीका नेतालाई नक्सालस्थित होटेल टंगाल उडमा बोलाएका पारसले छुट्टाछुट्टै तथा सामूहिक छलफल गरेका हुन् । त्यस क्रममा उनले तीनवटा पार्टीबीच एकता प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइबारे चाँसो व्यक्त गरेको सहभागी नेताहरूले जानकारी दिए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस पारसमाथि छानबिन हुने
ट्याग्स: Paras shah, पूर्वयुवराज पारस शाह